CDC မျက်နှာဖုံးလမ်းညွှန်ချက်အသစ်- သင်သိလိုသည်များ
ပင်မစာမျက်နှာ » နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ » CDC မျက်နှာဖုံးလမ်းညွှန်ချက်အသစ်- သင်သိလိုသည်များ
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွား • ပညာရေး • အစိုးရသတင်းများ • ကနျြးမာရေးသတင်းများ • သတင်း • လူပုဂၢဳိလ္မ်ား • တာဝန်ရှိသော • လုံခွုံမှု • ခရီးသွားလုပ်ငန်း • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • ယခုခေတ်စား • USA မှ Breaking News
N95 နှင့် KN95 မျက်နှာဖုံးများသည် အမှုန်အမွှားများကို စစ်ထုတ်ရာတွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း ဝတ်ဆင်ရန် အတော်လေး လွယ်ကူသေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကဲ့သို့သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆက်တင်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ မျက်နှာဖုံးများသည် လူတစ်ဦး၏မျက်နှာနှင့် ထိထိရောက်ရောက် တံဆိပ်ခတ်ထားပြီး အမှုန်အမွှားလေးများ အနည်းဆုံး 95% ကို စစ်ထုတ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အမေရိကန် ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအဘို့အစင်တာများ (CDC) သို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း မျက်နှာဖုံးများ မှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များကို အပ်ဒိတ်ထုတ်ပြန်ရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟု သိရသည်။
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပြန့်ပွားမှုကို ဟန့်တားရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော စစ်ထုတ်ခြင်း (ပိုမိုစျေးကြီးသော) N95 နှင့် KN95 မျက်နှာဖုံးများ ဝတ်ဆင်ရန် အမေရိကန်များကို တိုက်တွန်းမည်ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ လူတွေက "KN95 သို့မဟုတ် N95 မျက်နှာဖုံးကို တစ်နေ့လုံး ၀တ်ဆင်ထားရင် သည်းခံနိုင်ရင်၊" လုပ်သင့်တယ်လို့ CDC က ပြောပါတယ်။
N95 နှင့် KN95 မျက်နှာဖုံးများသည် အဘယ်နည်း။
N95 နှင့် KN95 မျက်နှာဖုံးများအကြား တစ်ခုတည်းသော ခြားနားချက်မှာ US နှင့် တရုတ်အာဏာပိုင်များမှ သတ်မှတ်ထားသော စံနှုန်းအမျိုးမျိုးမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တရုတ်သည် ဤဧရိယာတွင် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်စည်းမျဉ်းများရှိသည့် ဆေးရုံကဲ့သို့သောအဖွဲ့အစည်းများရှိသည့် US နှင့်မတူဘဲ KN95 မျက်နှာဖုံးများကို စမ်းသပ်ရန် လိုအပ်သည်။ အမေရိကန်စံနှုန်းသည် KN95 မျက်နှာဖုံးများထက် အနည်းငယ်ပို၍ အသက်ရှူနိုင်သော N95 မျက်နှာဖုံးများကိုလည်း လိုအပ်သည်။
2. အဆိုပါဘာတွေလဲ CDC အခုပဲ Mask နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြံပြုချက်
CDC လမ်းညွှန်ချက်၏ လက်ရှိဗားရှင်းသည် အောက်တိုဘာလတွင် နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားပြီး၊ ဆက်တင်အများစုတွင် လူအများစုအတွက် အထည်နှစ်လွှာပါသော ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသော အဝတ်မျက်နှာဖုံးများကို အသုံးပြုရန် အကြံပြုထားသည်။ အထူးသဖြင့် ၎င်းသည် ယေဘူယျလူများအား “ခွဲစိတ်ခန်း” ဟု အမှတ်အသားပြုထားသည့် N95 အသက်ရှူကိရိယာကို မဝတ်ဆင်ရန် အထူးလိုအပ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့သည် ဝတ်ဆင်သူနှင့် ၎င်းတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများကို ကာကွယ်ပေးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
အကြောင်းရင်းမှာ US ဆေးရုံများသည် KN95 ကာကွယ်ရေးကို လုံးဝအသုံးပြုခွင့်မပြုသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး CDC မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ကန့်သတ်စတော့ရှယ်ယာများကို ဦးစားပေးအသုံးပြုစေလိုပါသည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တစ်ကိုယ်ရည်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်း (PPE) ရှားပါးလာချိန်မှ စတင်ခဲ့သော အကြံပြုချက်သည် ကာလကြာရှည် အသုံးမပြုတော့ကြောင်း ဝေဖန်သူများက ပြောကြားခဲ့သည်။
3. Omicron အကြောင်း အပြောင်းအလဲ ရှိပါသလား။
တိုတိုပြောရရင် ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံး မဟုတ်ပါဘူး။ Omicron အမျိုးကွဲသည် ယခင် SARS-CoV-2 ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲများထက် ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော ကိုယ်ခံအားကို တွန်းလှန်နိုင်စွမ်း ပိုရှိကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် တချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဥရောပ ဂျာမနီကဲ့သို့ပင် FFP2 မျက်နှာဖုံးများ - ပေးထားသည်။ EU စံသတ်မှတ်ချက် N95 အဆင့်ကာကွယ်မှု - ဇန်နဝါရီ 2021 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကမ်းလှမ်းထားသည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ PPE ရရှိနိုင်မှုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းပြီး Omicron မထွက်ပေါ်မီအချိန်အတော်ကြာပြီးနောက်ဖြစ်သည်။
4. အမေရိကန်လူမျိုးများသည် အပိုကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပုံရသည်။
ကောင်းပြီ၊ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်များအရ အမေရိကန်တွင် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ CDC လမ်းညွှန်အပ်ဒိတ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ Hotodeal အမှတ်တံဆိပ်၏ KN40 မျက်နှာဖုံး 95 ထုပ်သည် $79.99 သို့ ခုန်တက်သွားသည်။ အမေဇုံလတ်တလောဒေတာအရ နိုဝင်ဘာလနှောင်းပိုင်းတွင် $16.99 မှတက်ခဲ့သည်။